အဘယ်ကြောင့် porn တွေကိုဆဲအလုအယက် (ထိခိုက်လွယ်) ဖြစ်ပေါ်သလဲ? - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
လိင်စိတ်နိုးကြားမှုကိုခံစားမှုအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခြင်းသည်စွဲလမ်းမှုအတွက်အဓိက ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည် (နှင့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများ) ဟုသင်ယူဆသည်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းကိုအလိုရှိသည်။ YBOP ဗီဒီယိုများ porn အသုံးပြုသူများကိုအပေါ်ထက်ပိုတစ်ဒါဇင်လေ့လာမှုများ အစီရင်ခံစာ sensitive ကနှင့် (မကြာခဏ) compulsive porn အသုံးပြုမှုအတွက်ကြောင့်အတူလိုက်ပါသောဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကို။
အပြည့်အဝနားလည်နိုင်ရန်နှင့်တပ်မက်ကြည့်ရှုရန် ဒီစာမျက်နှာ နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါး - အဘယ်ကြောင့်ငါတစ်ဦးကအဖော်သန်း Porn ပိုစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကိုရှာပါသလား? ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အဘယ်ကြောင့်တကယ့်ဖြစ်ရပ်ထက်ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းနိုင်သည်ကို၎င်းတွင်နက်ရှိုင်းစွာရှင်းပြထားသည်။ အစပျိုးခြင်းနှင့်စွဲလမ်းမှုများကိုဖြေရှင်းရန်အကြံပြုချက်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပါ။ Brett (#21 ပြသ) porn တွေကိုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတင်းမာမှုနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဘယ်လိုကရှင်းပြသည် ဒီတိုတိုဗီဒီယိုမှာအကြံဥာဏ်တွေလည်းပါရှိပါတယ် - စွဲလမ်းမှု၏အမှန်တရားအသုံးပြုပုံတဏှာပြီးတော့တိုက်တွန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့် Porn စွဲရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လို။
ဒါဟာအားလုံးအသိစေသည်။ နွေရာသီ 2011 ၌ငါအသစ်တစ်ခု fetish ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ပါဘုရားငါသည်ငါ့ဦးနှောက်ထဲမှာ dopamine ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ ငါ porn ၏ဤအသစ်ကအမျိုးအစားကိုကြည့်တဲ့အခါမှာငါ့ကိုယ်ကိုလှုပ်မယ်လို့ဒါမှပျော်ရွှင်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. ကျွန်မအများကြီးလျော့နည်းပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပြီးကျောပုံမှန်သွားပြီဖူးဘူး။
ငါနောက်တစ်နေ့တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတစ်စေ့တစ်စောင်းကြည့်မိသည်။ ဦး နှောက်ထဲတွင်ပူပြင်းသည့်လျှပ်တပြက်တစ်ခုလိုထူးခြားသည့်အသံတစ်သံထွက်လာသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ၊ ကျွန်ုပ်သည်အလျင်အမြန်ထွက်ခွာရန်ငါ့ကိုလုံလောက်စွာနှိုးဆွပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ dopamine သည်ယခုအချိန်တွင်မြင်တွေ့ရမည့်မြင်ကွင်းနှင့်တူရလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်၏နေ့သည်နာရီအနည်းငယ်အတွင်း၌ကြီးစွာသောတစ်ခုမှမိမိကိုယ်ကိုသတ်သေမှုအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ခံနိုင်ရည်ရှိရန်ခက်ခဲသော်လည်းတစ်စုံတစ်ရာသည်မိမိကိုယ်ကိုပြုပြင်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုကျွန်ုပ်စိတ်ချသည်။
ယခုငါလေးလခန့် p / m / o မလိုဘဲကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်တီဗွီရှိုးတွင်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်အရာများကိုမဆိုမြင်တွေ့ရသည့်အခါအဆောတလျင်သတိထားနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိသည်။
တော်တော်လေးရေပန်းစားနေတဲ့ကြယ်ပွင့်တစ် ဦး ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်မသတိရတယ်။ ဦး နှောက်ကသူမမျက်လုံးကိုဖွင့်ပြောဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါငါအဲဒီလိုတိတိကျကျမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော့်မှတ်ဥာဏ်ထဲအမြဲတမ်းလောင်ကျွမ်းသွားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သောအရာများသည်ယခုမှေးမှိန်ပျောက်ကွယ်သွားပြီဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်။ ဒါကြောင့်ငါကအားစိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်ငါအဲဒါတွေကိုသုံးနိုင်မှာပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါဘာလို့အဲ့တာလုပ်မှာလဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့သုံးလကဆိုရင်သူမရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိရင်၊ ငါကြိုက်နှစ်သက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ကိုချက်ချင်းပဲငါပုံဖော်လိမ့်မယ်။ အခုတော့သူမရဲ့မျက်နှာကိုမကြိုးစားဘဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမှတ်မိတော့ဘူး။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ၊ ညနေခင်းအင်တာနက်ကိုကျွန်တော်ထွက်တော့မည်မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းမှာတစ်နှစ်မကဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်း၊ အိမ်တစ်အိမ်တည်းနေခြင်းနှင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ထိုင်ခြင်းများကတွန်းအားများဖြစ်စေသောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ဤကွန်ပြူတာပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းသော blockers ၂ ခုတပ်ဆင်ထားသည်။ , နှင့်ငါငါ့ဇနီးအိမ်ပြန်ရောက်သောအခါ, သူမငါ၌ငါ၌အခက်အခဲရှိမရှိငါ့ကိုမေးမယ့်မယ်ဆိုတာသိပေမယ့်တစုံတခုကိုမျှအလိုဆန္ဒပြည့်ဝစွာထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤနေရာတွင်သင်ခန်းစာမှာပိုမိုလွယ်ကူလာသည်နှင့်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကတော့မင်းရဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးရှောင်ရှားခြင်းပဲ။ ကျွန်ုပ်၏ PMO ဖြစ်ရပ်များ၏ ၉၅% သည်ကွန်ပျူတာ၌တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်အခြားနှိုးဆွသောအရာများကိုကြည့်ရှုရန် ရည်ရွယ်၍ ကွန်ပျူတာသို့ကျွန်ုပ်သွားလေ့မရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်ထိုင်။ ငြီးငွေ့လာသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်၎င်းကိုစတင်ရှာဖွေသည်။ ထို့ကြောင့်ငါကောင်းသောည၊ အစားအခြားအခန်း၌ကောင်းသောစာအုပ်။ ဒီနေရာမှာအခြားတစ်ယောက်ယောက်ကဒီညမှာလုံးလုံးရုန်းကန်နေတယ်ဆိုရင်ဒီအရာကိုပိတ်ပြီးသင်လုပ်နိုင်တဲ့အခြားအရာတစ်ခုခုကိုလည်းရှာပါ။ 🙂
စိတ်ဝင်စားစရာက porn ဟာငါ့ကိုနည်းနည်းလောက်မလှည့်ဘူး။ ငါစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှတုန်လှုပ်ဖွယ်ရပေမယ့်ငါမကအခြားတုံ့ပြန်မှုရှိသည်။ ငါ့ကောင်မလေးကအခုလုပ်နိုင်တာတစ်ခုပဲလို့ငါထင်တယ်၊ ငါအရမ်းပျော်တယ်။ ဒါကြောင့်အခုတော့ငါ့ ဦး နှောက်ဟာနည်းနည်းပြောင်းလဲသွားပြီလို့ထင်တယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ sexy image ကိုဆွဲဆောင်တာဟာပုံမှန်ပါပဲ။ မင်းဟာ porn စွဲလမ်းဖူးသူတစ်ယောက်တောင်မှ dopamine တိုးပွားလာတယ်။ ဒါ့အပြင်သင်ကအချိန်အတော်ကြာညစ်ညမ်းကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်ပုံတွေကအားကောင်းတဲ့အချက်တွေအဖြစ်လှုပ်ရှားနေမှာပါ sensitized အာရုံကြောလမ်းကြောင်း. သင့်ဦးနှောက်ကိုလျင်မြန်စွာဖြစ်နိုင်သော porn အသုံးပြုမှုကိုမျှော်မှန်းသကဲ့သို့သင်တို့အကျိုးကို circuitry buzz ခံစားနေကြသည်။ တစ်ခုမှာကောင်လေးကလည်း,
ဒါကအပြင်းထန်ဆုံးပဲ၊ ဘယ်လောက်နက်ရှိုင်းတယ်ဆိုတာရူးသွပ်တယ်။ ငါတိုက်ခန်းထဲမှာတစ်ယောက်တည်းနေတိုင်း“ porn !!” ကိုအလိုအလျောက်စဉ်းစားမိတယ်။ ဒါဟာနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေပါတယ်၊ ငါပင်စဉ်းစားမ; ဒါရုံပါပဲ။ ငါမနေ့ကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ငါတို့သူထွက်သွားပြီးတံခါးကိုပိတ်လိုက်တယ်။ ချက်ချင်းပဲငါ့ ဦး နှောက်ဟာ“ porn !!” လို့ထင်ခဲ့တယ်။
ဤတွင်ပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုမှယူဆောင်လာသည့် sensitization ၏နည်းပညာဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ဖြစ်သည်။
“ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်းတွင်တွေ့နိုင်ပြီးထပ်ခါထပ်ခါဆေးများ (မူးယစ်ဆေးဝါးသည်းခံနိုင်မှုနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်) အပြီးမူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သတ်သည့်ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်ကြုံတွေ့ရသည့်အခါစွဲလမ်းမှုသည်ပိုမိုမြင့်မားသော (အာရုံခံနိုင်သည့်) မူးယစ်ဆေးစွဲလိုမှုနှင့်လည်းဆက်စပ်နိုင်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆေးလိပ်ဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည့်စွဲလမ်းနေသူများပြန်သွားရန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ထိုသို့သောအာရုံတွင် ဦး နှောက် mesolimbic dopamine ထုတ်လွှင့်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် mesolimbic neuron အတွင်းရှိမော်လီကျူးများပြောင်းလဲခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် FosB ။"
တစ်နည်းမှာစွဲသင့်ဦးနှောက်အတွက်ခိုင်မာတဲ့အာရုံကြောလမ်းကြောင်းဖန်တီးထားပါတယ်, Pavlovian-based အမှတ်တရများ, ကြိုတင်အသုံးပြုမှု (ပုံများ၊ ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းစသည်ဖြင့်) နှင့်အလွယ်တကူသက်ဝင်လှုပ်ရှားနိုင်သည်။ ထိုအာရုံခံလမ်းကြောင်းများသည် dopamine ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောလျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှု (“ buzz” သည်ပကတိဖြစ်သည်) တွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောမြင့်မားသောမြင့်တက်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ အချိုမှု, သို့မဟုတ်နှစ် ဦး စလုံး - မတရားသောဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ရေရှည်ကိုစွဲစွဲလမ်းသူများတွင် dopamine ၏ cue-induced spike ဖြစ်နိုင်သည် မူးယစ်ဆေးတာကနေဆူးကဲ့သို့မြင့်မားသော။
သင်သည်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်ဖွင့်ပြီးသင်၏ dopamine အချက်ပြမှုကိုသင့်အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပေးခဲ့ပေမည်၊ သို့သော်ထိခိုက်လွယ်သောလမ်းကြောင်းများသည်ဘယ်တော့မျှပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သူတို့သည်အားနည်းသွားလိမ့်မည်။ ဥပမာ၊ အနှစ် ၂၀ ကြာသမ္မာသတိရှိသူတစ် ဦး သည်ဘီယာကြော်ငြာများကြောင့်အစာရေစာမပြတ်လပ်တော့ပါ။ အကယ်၍ သူကဘီယာသောက်လိုက်ရင်သူရဲ့အာရုံခံနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကလင်းလာပြီးထိန်းချုပ်မှုနဲ့မူးယစ်ဆေးဝါးပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ယခင်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သူတို့သည်အထူးသဖြင့်အစွမ်းထက်သောသူများကိုကြာမြင့်စွာသတိရရန်လိုအပ်သည်။
တဦးတည်းပြန်လည် porn အသုံးပြုသူများကိုရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်း,
သင် porn ကိုချိတ်ဆက်မိသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်သည်အချိန်ကြာမြင့်စွာရပ်တန့်နေလျှင်ပင်၎င်းထဲ၌နောက်တစ်ခါထပ်မံဖမ်းဆီးခံရခြင်း၏အန္တရာယ်သည်အမြဲတမ်းရှိနေလိမ့်မည်။
ဒါကအပြည့်အဝပြန်လည်နာလန်ထူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဆေးလိပ်သောက်သူဟောင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာ ၁၀ နှစ်လောက်ဆေးလိပ်မသောက်ရသေးပေမယ့်ရံဖန်ရံခါစွဲလမ်းမှုတွေရနေဆဲဆိုတာကိုပြောနိုင်ပါတယ်။ ငါတဖြည်းဖြည်း porn ၏ဆွဲဆောင်လည်းထိုအရပ်၌အမြဲဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသဘောပေါက်မိပါတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ“ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ဤမျှကြာအောင်တာရှည်နိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်သည်စွဲလမ်းနေမည်မဟုတ်” ဟူသောဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်ညီညွတ်ခြင်းသည် PORN Talking ဖြစ်သည်။ ကျနော်တို့ထပ်ခါတလဲလဲဖောက်သည်များဖြစ်ကြသည်။
သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုများအတွက်ယောက်ျားတွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ PMO ဟာငါကျော်ဖြတ်ရမယ့်စွဲလမ်းမှုနဲ့မတူပါဘူး။ အခုငါသောက်နေတာ၊ ဆေးလိပ်မသောက်တော့တာကြာပြီ ဆေးလိပ်သောက်တာနဲ့ ၇ ကြိမ်ကြိုးစားကြည့်တယ်။ စွဲလမ်းမှုသည်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးတစ်ရက်ပြီးတစ်ရက် ၁၄ ရက်ကြာသည်။ ၁၄ ရက်ကြာပြီးနောက်အခြေအနေများပိုကောင်းလာသည်ဟုထင်ရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင် PMO သည်ဆေးလိပ်စွဲခြင်းထက် ပို၍ ခက်ခဲသည်။ ခပ်သိမ်းသောအချိန်ကိုကြည့်ရှုရန်ပတ်ပတ်လည်ကောင်းတဲ့ရှာဖွေနေအမျိုးသမီးတစ် ဦး ရှိပါတယ်။ ထိုအခါအမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုစိတ်ကူးယဉ်လာ, MO ကိုသို့မဟုတ် PMO ဖြစ်နိုင်သည်။ ငါသာအာရုံစူးစိုက်နေပြီးအမျိုးသမီးများအကြောင်းကိုစိတ်ကူးမယဉ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ဤအရာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာရိုက်ကူးနိုင်လိမ့်မည်။
အိမ်ထောင်ဖက်, ငါသည်ဤဖိုရမ်တွင်ပေါ်ရှိအခြားလူများအတိအကျဟုစောင့်ရှောက်လော့။ ကျနော်တို့တစ်နည်းနည်းနဲ့ကဖြစ်သင့်သောသူအပေါင်းတို့သည်ဤကြိုတင်အယူအဆတွေရှိသည်ကြောင့် PMO အရှုံးမပေးဖို့ဒါမှခဲယဉ်းသည်အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ထင် ပိုလွယ်လိုက်တာ အရင်ကစွန့်လွှတ်ခဲ့ရတဲ့အရာများ (အရက်၊ စီးကရက်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ထက်ကန်ကန်ခြင်း။ ကျနော့်အတွေ့အကြုံမှာလည်းဒီဟာကသေချာပေါက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ပိုလို့လည်းလူလတ်တန်းစားပါပဲ။ အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အချိန်ကာလအတွက်သိမ်မွေ့နိူင်ပြီး၊ ရုတ်တရက်ခုန် ထွက်၍ သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်သတိဝီရိယသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကိုအပေါ်မျက်စိစောင့်ရှောက်ရန်ရှိသည်။ သင်၏အတွေးများကိုသတိပြုမိပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် "သွားနေခြင်း" ကိုကြည့်ပြီးသင့် ဦး နှောက်၏တွားသွားသတ္တဝါတစ်ကောင်ကပြပွဲကိုမပြီးမီ၎င်းကိုရပ်တန့်ထားပါ။ ဒါကဒီတစ်ခေါက်ငါ့အတွက်တကယ်အလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပဲ။ ငါပုံစံများကိုကြည့်ပါ။ ငါအဲဒီမှာစသွားတဲ့အခါငါသိတယ်၊ ငါစိတ်ထဲပျောက်သွားအောင်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ချက်ချင်းပဲချက်ချင်းပြေးလိုက်တယ်။ ဒါဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပို။ ပို။ အင်အားစိုက်ထုတ်ဖြစ်လာ; အတွေးတွေပေါ်လာပြီးငါသူတို့ကိုဖြည်းဖြည်းလေးလွှတ်လိုက်တယ်။
ဒါပေမယ့်အစောပိုင်းကာလတွေမှာတော့ငါဟာစာသားအတိုင်းပဲငါ့ရဲ့လျှာကိုကိုက်မိတယ် နာကျင်မှုကိုခံစားရပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလျှောချမိသည့်ခံစားမှုဆိုင်ရာတွေးခေါ်မှုဖြစ်စဉ်မှထွက်လာရန်လုံလောက်သည်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပြောရရင်အဲဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်တကယ်ထိရောက်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကသင်ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိသင်အမြဲရှိနေသည်။ မင်းလုပ်နေတာတောင်မှဘယ်သူမှမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး
အခုတော့မနေ့ကဖြစ်ပျက်ကိုကြည့်ပါ။ ငါတစ်နည်းနည်းနဲ့, google မှာလှပသောမိန်းကလေးများမှာကြည့်ဖို့စတင်ထို့နောက်ထို့နောက်အဝတ်အချည်းစည်းမိန်းကလေးများဖို့, ပြီးတော့ softcore ရုပ်ပုံများနှင့်နောက်ဆုံးတော့ညစ်ညမ်းပုံနဲ့ GIF များရန်, ရေကူးဝတ်စုံနဲ့အတွက်မိန်းကလေးတွေကိုမှထွက်သွားလေ၏။
ကျွန်ုပ်သည် ၄၂ ရက်အတွင်းဤအရာကိုမတွေ့ခဲ့ပါ (ဂရိနိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်၏နွေရာသီအားလပ်ရက်တွင်နေ့စဉ်နှင့်အမျှလမ်းများနှင့်ကလပ်များတွင်အလွန်အမင်းပူပြင်းသည့်အမျိုးသမီးများကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်း) ကျွန်ုပ်သည်အင်တာနက်ပေါ်မှစုံလင်သောလှပသောမိန်းကလေးများနှင့်တွေ့သောအခါ… ငါ့ကိုလှုံ့ဆော်ရန်နှင့်ပြည့်စုံဖို့ပြီးပြည့်စုံသော porn ရုပ်ရှင် / မိန်းကလေးရှာရန်ရုံနာရီ surfing နှင့်ယခုစာသားအမျိုးသမီးတစ် ဦး ၏ပုံရိပ်တိုင်းငါ့ကိုနှိုးဆော်ခြင်း။ သူတို့ကစုံလင်ပြီးအရမ်းပူနေတယ်။ တော်တော်လေးသဘာဝတုံ့ပြန်မှုသော်လည်း, ငါကိုယ့်ကိုကိုယ်မှထင်ခဲ့တယ်။
ငါနောက်ဆုံးသူကပြောတယ်ခြေလှမ်းကို ယူ. Google တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုမြင်သောအခါထိုအခါမူကား, မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ငါသည်ငါ့နှလုံးပေါင်မှစတင်ခဲ့ငါအခုအချိန်မှာပယ်သွားပါ, ပြီးတော့တောင်မှငါ့အဒစ်ကိုထိစရာမလိုဘဲမယ်လို့ကဲ့သို့ငါ၏အလိင်တံနဲ့ကျွန်မရန်အပြေးအလွှားအသွေးတော်ခံစားခဲ့ရ, ငါ၏ဦးခေါင်းသို့အပြေးအလွှား dopamine ခံစားရတယ်။
ငါလိင်ဆက်ဆံမှုလုပ်နေတာစုံတွဲတစ်တွဲ၏ရုပ်ပုံကိုမွငျလြှငျ, ငါသည်ကိုယ်အသက်ကိုအတွက်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့မှာရှာဖွေနေခဲ့သည်တူသောငါခံစားရတယ်။ .. စောင့်ဆိုင်းဒီတော့ဒီလိင်ဖြစ်သနည်း ငါမြင်နေခဲ့ရာမယုံကြည်နိုင်ဘူး။ ဘယ်တော့မှမအစဉ်အဆက်ဘဝမှာငါဒါရိုးရှင်းသောရုပ်ပုံကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်နှိုးဆွခဲ့သညျ။ လိုပဲ, ငါ့ဦးနှောက်အရှိဆုံး primal ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဒေသများရုံ activated ခဲ့သညျ။ ဒါဟာမူးယစ်ဆေးအပေါ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တူသလိုခံစားရတယ်။
မယုံနိုင်လောက်အောင်လည်းရွံရှာအခြို့ကိုမျိုးခံစားရတယ်, နှိုးဆော်ခြင်းခံရစဉ်ငါထို့နောက်, ငါ့အကြိုက်ဆုံး pornstars အချို့ဓါတ်ပုံတွေကိုကြည့်ဖို့ဆက်လက်။ ဒါဟာလွန်ပြီးအိမ်မက်ဆန်ခဲ့သည်။ သူတို့မည်သို့ကဲ့သို့ကြည့်ရှုနိုင်သလဲ ကျွန်မသူတို့ကို virtual ရုပ်သို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုအချို့ကိုမျိုးခဲ့ကြသည်ထင်ခဲ့တယ်။ အဘယ်သူမျှမအမျိုးသမီးတွေအစစ်အမှန်ဘဝအတွက်နဲ့တူလှပါတယ်။ အဘယ်သို့သူတို့ကိုယ်တိုင်တူဆကျဆံခံရပါစေနိုင်သနည်း ရုံလိင်အရာဝတ္ထုအဖြစ်, အခြားဘာမျှမ။
တစ်စိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်ကျွန်မထက်ပို 40 နေ့ရက်ကာလအဘို့ porn ကိုကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း, ငါ၏ဦးခေါင်း၌အစဉ်မပြတ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဟောင်းကို porn မြင်ကွင်းများ၏ရုပ်ပုံများကိုပြန်လာမယ့်နဲ့ပျောက်ကွယ်တိမ်မြုပ်။ မနေ့က, ငါသည်ဤသိချင်စိတ်အတွက် ပေး. ရှိသမျှတို့ကိုငါတစ်ရက်ချွတ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်အပေါငျးတို့သ porn နှင့်လိင်-related အရာသည်ငါ့ခေါင်းကိုရှင်းလင်း။
ငါအရာအားလုံးကိုပိတ်လိုက်ပြီးဗျာဒိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်း, စနစ်တကျ reboot နိုင်ရန်အတွက်ငါလုံးဝ, နေ့တိုင်းလိင်နှင့်ညစ်ညမ်းစဉ်းစားရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းတည်းသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်အကြောင်း, ငါ etc / နေ့စွဲမိန်းမတို့အားစကားပြောရန် / တွေ့ဆုံရန်, ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပေါ်မှာအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်စနစ်တကျငါ့အသက်ကိုအသက်ရှင်ရန်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်ရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။
မတော်တဆနှိုးဆွခြင်းတစ်ခုခုကိုမတော်တဆထိတွေ့ခြင်းသည်အမြဲတမ်းပြaနာမဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့၊ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအပါအ ၀ င်မည်သည့်ဖြစ်ရပ်များကိုမဆိုပုံတစ်ပုံကနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်နိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်အလေးအနက်သံသယရှိသည်။ တစ် ဦး စွဲအသုံးပြု။ အကြောင်းကိုစိတ်ကူးစတင်စတင်သည်နှင့်သူ၏စွဲလိုက်ရှာသည့်အခါအာရုံခံစားတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ တိရိစ္ဆာန်စမ်းသပ်ချက်များအရမူးယစ်ဆေးဝါယာကြိုးများကိုတက်ကြွစွာရွေးချယ်ခြင်းသည် ဦး နှောက်ကို၎င်းကိုဆေးထိုးရန်မလိုဘဲထိုးသွင်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားကြောင်းဖော်ပြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ခြင်းကအာရုံခံစားမှုဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်အဓိကစွဲသော ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ တိရိစ္ဆာန်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးကို၎င်း၏တမင် ရည်ရွယ်၍ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေပြီး၊
ထို့ကြောင့် Facebook ကို hotties အတွက်တက်ကြွစွာရှာဖွေခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသောစွဲလမ်းစေသည့်လမ်းကြောင်းများနှင့်သင်၏စွဲလမ်းမှုကိုအားဖြည့်ပေးသည်။ Hard-core ပုံရိပ်တွေကိုခုန်လိုက်တာနဲ့ page ကိုချက်ချင်းပိတ်လိုက်တာကတကယ်တော့မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ရဲ့စွမ်းအားကိုအားကောင်းစေပါတယ်။ အကယ်၍ အရက်သမားတစ် ဦး သည်ဝိုင် ၁ ခွက်ဖန်ခွက်ပြီးလျှင်အလွယ်တကူရပ်နိုင်လျှင်သူ၌ပြnoနာမရှိပါလိမ့်မည်လော။ (ကြည့်ပါ ထိတွေ့တုံ့ပြန်မှုကာကွယ်ခြင်းကုထုံး (မျိုးသုဉ်း) ) ကပိုသည်။ ချိတ်ဆက်ရှောင်ကြဉ်ပါ တမင်ရှာ နှင့် arousal ။ မတော်တဆတစေ့တစောင်းကိုရွေးချယ်မထားပါ သို့သော်၊ သင်မြင်သောပုံတွင်နေခြင်း၊ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုအရာကိုစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပုံများကိုရှာဖွေခြင်းသည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်။
ဒါ့အပြင်တွေ့မြင် ဦးနှောက်မှ porn စွဲအကြောင်းမရှိနောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပါသလား